ဒီအလုပျ၏အနာဂတ်ဖြစ်ပါတယ်? - သတင်း Rule
သြစတြေးလျသိပ္ပံအေဂျင်စီ CSIRO လုပ်ငန်းခွင်တိုးဒီဂျစ်တယ်အာရုံစိုက်နှင့်အလိုအလျောက်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ပြောပါတယ်. အဘယ်သူသည်တစ်ဦး '' အွန်လိုင်း chaperone '' ဖြစ်လိုလား?
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “ဒီအလုပျ၏အနာဂတ်ဖြစ်ပါတယ်? သိပ္ပံပညာရှင်များသည်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အဆဲ 2035 အတွက်လူသားပွင့်လင်းဖြစ်လိမ့်မည်သည့်ကြိုတင်ခန့်မှန်း” ပေါလုက Karp ကရေးသားခဲ့သည်, theguardian.com သောကြာနေ့ 26 ဖေဖေါ်ဝါရီလအပေါ်များအတွက် 2016 05.41 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေနေအလုပ်သမားများ 2035 ဝေးလံခေါင်သီထိန်းချုပ်ထားသောမော်တော်ယာဉ်အော်ပရေတာသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း chaperones အဖြစ် retraining ထည့်သွင်းစဉ်းစားစေခြင်းငှါ,.
သူတို့အားအကြံပြုအနာဂါတ်အလုပ်အကိုင်နှစ်ယောက်ရှိပါတယ် အ CSIRO အားဖြင့်တစ်ဦးအစီရင်ခံစာ ပို. ပို. ဒီဂျစ်တယ်အာရုံစိုက်နှင့် automated သြစတြေးလျလုပ်ငန်းခွင်အတွက်ဇယားနှစ် 20 ခေတ်ရေစီးကြောင်းက.
Related: အလိုအလျောက် post-အလုပ်လူ့အဖွဲ့အစည်းဆိုလိုခြင်းငှါငါတို့မူကားကြောက်လန့်ဖြစ်မနေသင့်
အဆိုပါအလုပ်အကိုင်ဝန်ကြီး, Michaelia ငွေစာရင်း, သြစတြေးလျ Computer ကိုလူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ conference မှာသောကြာနေ့ကအစီရင်ခံစာဖြန့်ချိ.
ငွေစာရင်းအစီရင်ခံစာကို "အခြို့သောအလုပ်အကိုင်များမလွှဲမရှောင်လာမည့်နှစ်အတွင်း automated ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ဒါပေမယ့်နည်းပညာဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုကိုအခြားသူများတိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန်နှင့်လည်းအသစ်သောအလုပ်အကိုင်နှင့်အခွင့်အလမ်းများကိုဖန်တီးပေးလိမ့်မည်" ပြသကပြောပါတယ်.
အဆိုပါအစီရင်ခံစာလုပ်သားအင်အားခြောက်အကြီးစားခေတ်ရေစီးကြောင်းသတ်မှတ်ဖေါ်ပြ, device ကိုဆက်သွယ်မှုတစ်ခု "ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်သည့်၏အရေးအပါဆုံး, ဒေတာပမာဏနှင့်ကွန်ပျူတာအမြန်နှုန်း, အလိုအလျောက်စနစ်များအတွက်လျင်မြန်စွာတိုးတက်လာခြင်းနှင့်အတုထောက်လှမ်းရေးနဲ့ပေါင်းစပ်စက်ရုပ် devices တွေကိုပိုမိုလျင်မြန်စွာအများအပြားတာဝန်များကိုလုပ်ဆောင်နိုင်သည်ကိုဆိုလိုသည်, အန္တရာယ်ကင်းကင်းနဲ့ထိထိရောက်ရောက်လူသားမြားသထက် ".
တိုးမြှင့်အလိုအလျောက်လုပ်သားများ '' အလုပ်များကိုရှုပ်ထွေးစေမည်. "အများစုကနိမ့်ကျွမ်းကျင်အလုပ်အကိုင် offshored သို့မဟုတ် automated လျက်ရှိသည်. အဆိုပါအကျိုးဆက်များစွာကိုအသက်မွေးဝမ်းနှင့်အလုပ်အကိုင်သို့ entry ကိုများအတွက်ထမြောက်တော်မူကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ပညာရေးဘား၏ဖြစ်နိုင်ခြေသည်,"ဟုအစီရင်ခံစာတွင်.
ကမ္ဘာမြေပေါ်တွင်နောက်ဆုံးအလုပ်: ဗီဒီယို - အပြည့်အဝအလိုအလျှောက်ကမ္ဘာပေါ်တွင်စိတ်ကူးယဉ်
အဆိုပါအစီရင်ခံစာတွင်သိပ္ပံပညာကိုတွေ့, နည်းပညာကို, အင်ဂျင်နီယာနဲ့သင်္ချာ (ပင်စည်) အသိပညာအတွက်အသုံးပြုသည် 75% အမြန်ဆုံး-ကြီးထွားလာအလုပ်အကိုင်နှင့် "သြစတြေးလျလူငယ်ပင်မအတွက်ကျသွားအကျိုးစီးပွားနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်သရုပ်ပြ" ထိုမြည်တမ်း.
နောက်ထပ်လမ်းကြောင်းသစ် peer-to-peer ပလက်ဖောင်းကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ Self-အလုပ်အကိုင်နှင့် freelancing အတွက်မျှော်လင့်မြင့်တက်ဖြစ်ပါတယ် Upwork, Kaggle, Innoventive နှင့် Freelancer.com, သောအစီရင်ခံစာ "အဆင်ပြေမှတဆင့်တန်ဖိုးကိုပေးဆို, paid အလုပ်သို့၎င်းတို့၏အခမဲ့အချိန်အသွင်ပြောင်းဖို့လူအားဖွင့် entry နဲ့များတိုးလာခြင်းမြန်နှုန်းနိမ့်အတားအဆီးတွေ ".
အဆိုပါအစီရင်ခံစာတွင် freelancing စဉ် "သေးသြစတြေးလျကိုကိုင်ယူမထားပါဘူးဟုဆိုသည်, တကကြီးမားသည် (နှင့်ကြီးထွားလာ) အခြားနိုင်ငံများတွင်အလုပ်အကိုင်မော်ဒယ် ", ထိုကဲ့သို့သောသုံးလုပ်သားများအတွက်တဦးတည်းသီးခြားလွတ်လပ်သည့်ကန်ထရိုက်တာသည်အဘယ်မှာရှိအမေရိကတိုက်၌ရှိသကဲ့သို့.
Related: Elon Musk: တက်စလာကားများနှစ်နှစ်မျှမောင်းသူနှင့်အတူအမေရိကန်ဖြတ်ကျော်နိုင်ပါလိမ့်မည်
စံပြအလုပ်မတည်ရှိပါဘူးဆိုရင်, အလုပ်သမားကဖန်တီးလိုအပ်နိုင်ပါသည်, အစီရင်ခံစာကအကြံပြု. "စီးပွားစွမ်းဆောင်ရှင်ကျွမ်းကျင်မှုကြီးမားတဲ့အဖွဲ့အစည်းများအတွင်းသေးငယ်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတည်ထောင်သူနှင့်န်ထမ်းများအတွက် ပို. ပို. အရေးကြီးသောဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိပါတယ်,"ကြေညာချက်ကဆိုသည်.
အဆိုပါအစီရင်ခံစာတွင်ဝန်ဆောင်မှုစက်မှုလုပ်ငန်းများခန့်မှန်း, အထူးသဖြင့်ပညာရေးနှင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု, အလုပ်အကိုင်ဖန်တီးရေးမောင်းထုတ်ရန်ဆက်လက်မယ်လို့, ဆိုလိုတာက "လူမှုရေးအပြန်အလှန်ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်စိတ်ခံစားမှုထောက်လှမ်းရေး ပို. ပို. အရေးကြီးသောဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်".
အဆိုပါအစီရင်ခံစာတွင်သြစတြေးလျရဲ့လုပ်သားအင်အားမတူကွဲပြားဖြစ်လိမ့်မည်ဟုဆိုသည်, အသက်ကျော်ငါးသြစတြေးလျ၌တနှင့်အတူ 65 တွင် 2035, မြင့်မားသောအမျိုးသမီးပါဝင်မှုနှင့်အလုပ်လုပ်အသက်အရွယ်၏ဖြစ်ခြင်းရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမား၏ကြီးမားသောအချိုးအစား.
အဆိုပါအစီရင်ခံစာအလုပ်အကိုင်ခေတ်ရေစီးကြောင်းအလုပ်သစ်အမျိုးအစားများကိုဖြစ်ပေါ်လိမ့်မည်ဟုဆိုသည်, နှင့်ဤ "ပိုကြီးကြီးမားတဲ့ data တွေကိုလေ့လာသုံးသပ်" ပါဝင်စေခြင်းငှါ, ခန့်မှန်းသုံးသပ်သည်, ရှုပ်ထွေးသောဆုံးဖြတ်ချက်အထောက်အပံ့သုံးသပ်သူများ, ဝေးလံခေါင်သီထိန်းချုပ်ထားသောမော်တော်ယာဉ်အော်ပရေတာ, ဖောက်သည်အတှေ့အကွုံကျွမ်းကျင်သူများက, ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတားဆီးကာကွယ်ရေးကျန်းမာရေးကိုကူမသောသူနှင့်အွန်လိုင်း chaperones.
"ကို un-crewed မော်တော်ယာဉ်များ၏မြင့်တက်လေယာဉ်မှူးတစ်ဦးအသစ်လုပ်သားအင်အားမှမြင့်တက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်, ယာဉ်မောင်းနှင့်မကိုမိုဃ်းကောင်းကင်မှမိမိတို့အလုပ်အကိုင်ကိုပြုတဲ့သူသင်္ဘောကိုဗိုလ်မင်း, ပင်လယ်သို့မဟုတ်သတ္တုတွင်းဆိုက်, ဒါပေမဲ့တစ်ဦးဝေးလံခေါင်ဖျားတည်နေရာအတွက်ရုံးကနေ,"ဟုအစီရင်ခံစာတွင်.
အပေါ်တစ်ဦးလုပ်သားအင်အားကုန်ထုတ်စွမ်းအားရှင်းလင်းပွဲမှတစ်ဦးမိန့်ခွန်းတွင် 8 ဒီဇင်ဘာလ, သြစတြေးလျကောင်စီကုန်သွယ်ရေးအလုပ်သမားသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးဒေ့ဗ်မှာ Oliver "လက်ရှိနည်းပညာတိုးတက်မှုများကပေးအပ်အစွန်းရောက်ပြောင်းလဲမှုများကိုတစ်ဦးပိုမိုနက်ရှိုင်းအတွက်ရလဒ်ဖြစ်ကြောင်းသတိပေးခဲ့သည်, အလုပ်အကိုင်စျေးကွက်၏ထွက်ပိုမိုကျယ်ပြန်နှင့်ပိုပြီးအမြဲတမ်းဆွန်း ".
ဟုသူကပြောသည် မကြာသေးမီက CEDA အစီရင်ခံစာ ပြသ5သန်းအလုပ်အကိုင် (40% သြစတြေးလျလုပ်သားအင်အား၏) လာမည့်ကျော်ကွန်ပျူတာများဖြင့်အစားထိုးခံရမြင့်မားသောဖြစ်နိုင်ခြေရင်ဆိုင်ရ 10 သို့ 15 နှစ်ပေါင်း.
"အသစ်နည်းပညာများ၏မြားစှာအကြိုးခံစားခှငျ့နေသော်လည်း, ကျွန်တော်တို့အသည်းအသန်လုပ်သားများရက်စက်ကြမ်းကြုတ်၏အချို့သောမျိုးကိုအလုပ်၏ချောထုပ်ဘို့အသီးအသီးအခြားဆန့်ကျင်လေလံဆွဲရန်တွန်းအားပေးတဲ့လုပ်အားစျေးကွက်ကပလက်ဖောင်းမှဆလိုက်ကိုရှောင်ရှားချင်, eBay ကိုစတိုင်လေလံ reverse,"အိုလီဗာကပြောပါတယ်.
Related: အတုထောက်လှမ်းရေး၏စူပါဟီးရိုး: ဒီပါရမီစစ်ဆေးမှုများထဲမှာသိမ်းထားနိုင်တယ်?
ကြှနျုပျတို့အားလုံးအတှကျ "ဒီစိန်ခေါ်မှု - သမဂ္ဂများ, အလုပ်ရှင်များ, အားပြိုင်မှုနှင့်အစိုးရများ - နည်းပညာဆိုင်ရာအခွင့်အလမ်းများကိုအသုံးချနှင့်ထိုသူတို့အဘို့အလုပ်မလုပ်စေရန်ဖြစ်ပါသည်, အစားဆန့်ကျင်ထက်, အလုပ်သမားရဲ့အကောင်းဆုံးအကျိုးစီးပွားကို,"ဟုသူကဆိုသည်.
ငွေသားအစဉ်အဆက်ထက် ပို. "ဟုပြောသည်, ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးအလုပ်သမားဈေးကွက်ထဲမှာဆက်ခံဘို့အရေးကြီးတယ်. အားဖြင့် 2019, အလွန်အမင်း-ကျွမ်းကျင်လုပ်သားများအတွက်ရရှိနိုင်အလုပ်အကိုင်အရေအတွက်ရရှိနိုင်ပါကပိုနှစ်ဆထက်အရေအတွက်ဖြစ်စီမံကိန်းဖြစ်ပါတယ် 1991.
29294	4 အပိုဒ်, ဉာဏ်ရည်တု (AI အ), သြစတြေးလျသတင်း, သြစတြေးလျနိုင်ငံရေး, စီးပွားရေး (သြစတြေးလျ), CSIRO, လုပ်ငန်းခွင်, Michaelia ငွေစာရင်း, သတင်း, ပေါလုက Karp, စက်ရုပ်, နည်းပညာ, အလုပ် & အလုပ်အကိုင်များ
← Microsoft က Surface ကစာအုပ်ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း ဦးနှောက်ခွဲစိတ်လူနာတွေကိုအကဲမှတစ်ဦး Cooler Way ကို →